Falling Water Ufakelo - Imagazini yoyilo
Ufakelo Ukuwa kwamanzi sisiseko sofakelo oludibanayo oluvumela abasebenzisi ukuba batshintshe indlela ebalekayo bejikeleze ityhubhu okanye iityhubhu. Umdibaniso wee-cubes kunye nomjelo ofakwe amanzi uhambisa umahluko wezinto ezihamba kunye nokuhamba kwamanzi okunamandla. Umjelo unokutsalwa ukuze ubone ubuhlalu bubaleka okanye ubekwe nje etafileni njengendawo enamanzi afrotiweyo. Iibhanti zithathwa kwakhona njengeminqweno eyenziwa ngabantu mihla le. Iziqwenga kufuneka ziboshwe kwaye zibaleke ngonaphakade njengamanzi.
Igama leprojekthi : Falling Water, Igama labayili : Naai-Jung Shih, Igama lomthengi : Naai-Jung Shih.
Olu loyilo lubalaseleyo luphumelele ibhaso loyilo lwegolide kwiimveliso zokukhanyisa kunye neeprojekthi zokuyila ukhuphiswano.	Ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ubone ipotifoliyo yoyilo lwembasa yegolide yokufumana amabhaso okufumana ezinye izinto ezintsha, ezintsha, zokuyila kunye nezibane zokuyila kunye nemisebenzi yoyilo lweeprojekthi.
Ubugcisa, ubugcisa kunye noyilo olwenziweyo lwenziweyo
Ufakelo Naai-Jung Shih Falling Water